ဒီလို အချက်တွေရှိလာပြီ ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်အချစ်ရေးကို တာ့တာပြလိုက်ပါတော့... - For her Myanmar
ဒီလို အချက်တွေရှိလာပြီ ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်အချစ်ရေးကို တာ့တာပြလိုက်ပါတော့…
ဟင့်အင်း စိတ်ညစ်နေမယ့်အစား ကိုယ်ကတော့ ဒရာမာဇုန်ထဲကနေပဲ ပြေးထွက်ပစ်လိုက်မယ်…
ကမ္ဘာပေါ်မှာ အခက်ခဲဆုံးအလုပ်က ဘာလဲသိလား? ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပြန်ပြန်ပြီး လိမ်နေရတဲ့အလုပ်ပဲ။ ဒါပေမဲ့လည်း အဲဒီလို ခက်ခက်ခဲခဲအလုပ်ကိုမှ အတော်များများက လုပ်နေတတ်ကြတာကိုး။ အထူးသဖြင့် အချစ်ရေး။ ဘယ်လောက်ပဲ ပျက်စီးနေတဲ့ အချစ်ခရီးလမ်းဖြစ်နေပါစေ ပြင်လို့ရတယ် ပြင်လို့ရတယ်ဆိုပြီး လိမ်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း တကယ်တမ်း ရှေ့ဆက်လိုက်လို့ အဆင်ပြေသွားလား ဆိုတော့လည်း မပြေပါဘူးနော်။ ဒါကြောင့် ဒီလိုအချက်တွေရှိလာပြီဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ရဲ့ ချစ်ခရီးကို တာ့တာပဲပြလိုက်ပါတော့။
၁။ လမ်းခွဲဖို့ စဉ်းစားမိလာတဲ့အချိန်။
သူ့ကိုချစ်နေရဲ့သား၊ ဒီအချစ်ရေးမှာလည်း ပျော်နေရဲ့သားနဲ့ သူ့ဆီကနေ ပြေးထွက်လာပြီး လမ်းခွဲလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ လူမျိုးဘယ်နှစ်ယောက်လောက်ရှိမလဲ ပြောပါဦး။ (မြန်မာကားထဲကလို လက်တွေ့မကျတဲ့ဟာတွေ မပြောကြေး) ဘယ်သူမှ မရှိပါဘူးနော်။ အကယ်၍ ကိုယ့်ခေါင်းထဲမှာ လမ်းခွဲရင် ကောင်းမယ် ဆိုတာမျိုး တွေးလာမိနေပြီဆိုရင် ကိုယ်တို့နှစ်ယောက်ကြားမှာ တစ်ခုခုမှားနေပါပြီ။ အဲဒါကို အချိန်မီမပြင်ဆင်ဘဲ မြုံထားရင်တော့ လမ်းခွဲသင့်ပါပြီ။
၂။ သူ့အပေါ် မယုံတော့ဘူး။
အချစ်ရေးမှာ အရေးကြီးဆုံးက နားလည်မှု၊ ယုံကြည်မှုနဲ့ စာနာဖေးမမှုပါပဲ။ အဲဒီ ၃ ခုထဲက တစ်ခုခုယုတ်လျော့နေပြီဆိုရင်တော့ ဘာကြောင့်ဆိုတဲ့ အကြောင်းအရင်းကိုရှာပြီး ဖြေရှင်းလို့ရရင် ဖြေရှင်းပေါ့။ ဖြေရှင်းလို့မရတော့ဘူးဆိုရင်တော့ သေချာပြန်စဉ်းစားတော့ပေါ့။
Related Article >>> ယောင်းရဲ့ LDRS က အဆင်မပြေဘူးဆိုတာ ဒီ (၄) ချက်ကိုကြည့်ပြီး သိနိုင်ပါတယ်
၃။ သူနဲ့ကိုယ်က ပြဒါးတစ်လမ်း သံတစ်လမ်းကို လျှောက်နေကြတာ။
ဘဝနှစ်ခုနဲ့ လူနှစ်ယောက်က ပန်းတိုင်တွေ၊ ရည်မှန်းချက်တွေ မတူတာက ကိစ္စမရှိပေမဲ့ တကယ်လုံးဝ မိုးနဲ့မြေ၊ အဖြူနဲ့အမည်းလို ဆန့်ကျင်ဘက်ကြီးဖြစ်နေရင်တော့ ရှေ့ဆက်ဖို့အတွက် တော်တော်ကြီးကို ညှိနှိုင်းရမယ့် အခြေအနေမျိုးဖြစ်သွားပါပြီ။ (ဥပမာ သူကတော့ မြို့ကြီးပြကြီးတွေမှာ ခမ်းခမ်းနားနား နေချင်ပြီး ကိုယ်ကတော့ နယ်မြို့လေးတစ်ခုမှာ အေးအေးချမ်းချမ်းနေချင်တဲ့ လူဖြစ်နေတာမျိုးပေါ့။)
၄။ သူ့အတွက် ပေးဆပ်ချင်စိတ် မရှိတော့ဘူး။
အချစ်ရေးမှာ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်က ပေးဆပ်ခြင်းတွေနဲ့ ဖြည့်စွက်ထားတာပါ။ (ဥပမာ ကိုယ့်မှာ ပစ္စည်းတစ်ခုခုဝယ်ချင်ပေမဲ့ သူ့အတွက်က ဒါလိုအပ်မှန်းသိတော့ ကိုယ့်လိုချင်စိတ်ကို မြိုသိပ်ပြီး သူ့အတွက်လိုတာပဲ ဝယ်ပေးလိုက်တာမျိုးပေါ့။) အကယ်၍ ကိုယ့်မှာ သူ့အတွက် ပေးဆပ်ချင်စိတ် လုံးဝ မရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့ ကိုယ့်အချစ်တွေလည်း ကုန်ခမ်းသွားပြီဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ပါပဲ။
၅။ သူနဲ့ ဝေးရာအရပ်မှာ ပိုပျော်တယ်။
ဒါကတော့ တအားရှင်းပါတယ်။ ချစ်နေကြတဲ့ လူတွေဆိုရင်တော့ တစ်ပတ်လောက် မတွေ့ရရင်တောင် ကိန္နရာချောင်းခြားပြီး အလွမ်းပင်လယ်ဝေနေကြမှာ ဆိုပေမဲ့ သူမရှိတဲ့ရပ်ဝန်းမှာ ပိုပျော်နေပြီဆိုရင်တော့ ဘာလို့သူရှိတဲ့အရပ်ကို ထပ်သွားဖို့ကြိုးစားဦးမှာလဲ?
၆။ အမြဲတမ်း စိတ်ဒုက္ခ ရောက်နေရတယ်။
အမြဲတမ်း စိတ်ဆင်းရဲနေရမှန်းတော့ သိတယ်။ မျက်နှာအမူအရာကလည်း ထုံထုံထိုင်းထိုင်းနဲ့ စိတ်ကလည်း အိပ်ပဲအိပ်ချင်နေသလိုလို စိတ်ဓာတ်တွေကျပြီး အိပ်ရာထဲမှာပဲ ခွေခေါက်နေချင်သလိုလို ဘာလို့မှန်းမသိ စိတ်ဆင်းရဲရတဲ့အထဲ သူ့မျက်နှာကိုမြင်ရတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ့်ဒုက္ခတွေ၊ စိတ်ဆင်းရဲစရာတွေက နှစ်ဆလောက် ဖြစ်လာရင်တော့ တစ်ချောင်ချောင်မှာ ကပ်ပြီး ဒုက္ခပင်လယ်ဝေနေရတဲ့ အကြောင်းအရင်းကို သေချာပြန်ဆန်းစစ်သင့်နေပါပြီ။
နှင်းတို့တွေကလေ တစ်ခါတလေကျတော့ အရမ်းရူးမိုက်ကြတယ် သိလား။ ဆက်မဖြစ်နိုင်မှန်း တိတိကျကျသိနေတဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းတစ်ခုကို အတင်းရှေ့ဆက်ဖို့ ပြုပြင်ဖို့ ကြိုးစားတတ်ကြရော။ တကယ်တမ်းခံစားရတာ ကိုယ်ပါ။ တခြားလူတွေကို ငါလက်လွှတ်ရတော့မလားလို့ မေးနေမယ့်အစား ကိုယ့်ဘာသာဆုံးဖြတ်ချက်ကို တိခနဲချလိုက်ပါ။ ကိုယ့်ဝမ်းနာ ကိုယ်သာသိမဟုတ်လား။ ကိုယ့်အကြောင်း၊ ကိုယ့်အတွင်းရေးကို ကိုယ့်ထက်ပိုပြီး ဘယ်သူကများသိနိုင်မှာမို့လို့လဲ။
ဟငျ့အငျး စိတျညဈနမေယျ့အစား ကိုယျကတော့ ဒရာမာဇုနျထဲကနပေဲ ပွေးထှကျပဈလိုကျမယျ…
ကမ်ဘာပျေါမှာ အခကျခဲဆုံးအလုပျက ဘာလဲသိလား? ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ပွနျပွနျပွီး လိမျနရေတဲ့အလုပျပဲ။ ဒါပမေဲ့လညျး အဲဒီလို ခကျခကျခဲခဲအလုပျကိုမှ အတျောမြားမြားက လုပျနတေတျကွတာကိုး။ အထူးသဖွငျ့ အခဈြရေး။ ဘယျလောကျပဲ ပကျြစီးနတေဲ့ အခဈြခရီးလမျးဖွဈနပေါစေ ပွငျလို့ရတယျ ပွငျလို့ရတယျဆိုပွီး လိမျတတျကွပါတယျ။ ဒါပမေဲ့လညျး တကယျတမျး ရှဆေ့ကျလိုကျလို့ အဆငျပွသှေားလား ဆိုတော့လညျး မပွပေါဘူးနျော။ ဒါကွောငျ့ ဒီလိုအခကျြတှရှေိလာပွီဆိုရငျတော့ ကိုယျ့ရဲ့ ခဈြခရီးကို တာ့တာပဲပွလိုကျပါတော့။
၁။ လမျးခှဲဖို့ စဉျးစားမိလာတဲ့အခြိနျ။
သူ့ကိုခဈြနရေဲ့သား၊ ဒီအခဈြရေးမှာလညျး ပြျောနရေဲ့သားနဲ့ သူ့ဆီကနေ ပွေးထှကျလာပွီး လမျးခှဲလိုကျတယျဆိုတဲ့ လူမြိုးဘယျနှဈယောကျလောကျရှိမလဲ ပွောပါဦး။ (မွနျမာကားထဲကလို လကျတှမေ့ကတြဲ့ဟာတှေ မပွောကွေး) ဘယျသူမှမရှိပါဘူးနျော။ အကယျ၍ ကိုယျ့ခေါငျးထဲမှာ လမျးခှဲရငျ ကောငျးမယျ ဆိုတာမြိုး တှေးလာမိနပွေီဆိုရငျ ကိုယျတို့နှဈယောကျကွားမှာ တဈခုခုမှားနပေါပွီ။ အဲဒါကို အခြိနျမီမပွငျဆငျဘဲ မွုံထားရငျတော့ လမျးခှဲသငျ့ပါပွီ။
အခဈြရေးမှာ အရေးကွီးဆုံးက နားလညျမှု၊ ယုံကွညျမှုနဲ့ စာနာဖေးမမှုပါပဲ။ အဲဒီ ၃ ခုထဲက တဈခုခုယုတျလြော့နပွေီဆိုရငျတော့ ဘာကွောငျ့ဆိုတဲ့ အကွောငျးအရငျးကိုရှာပွီး ဖွရှေငျးလို့ရရငျ ဖွရှေငျးပေါ့။ ဖွရှေငျးလို့မရတော့ဘူးဆိုရငျတော့ သခြောပွနျစဉျးစားတော့ပေါ့။
Related Article >>> ယောငျးရဲ့ LDRS က အဆငျမပွဘေူးဆိုတာ ဒီ (၄) ခကျြကိုကွညျ့ပွီး သိနိုငျပါတယျ
၃။ သူနဲ့ကိုယျက ပွဒါးတဈလမျး သံတဈလမျးကို လြှောကျနကွေတာ။
ဘဝနှဈခုနဲ့ လူနှဈယောကျက ပနျးတိုငျတှေ၊ ရညျမှနျးခကျြတှမေတူတာက ကိစ်စမရှိပမေဲ့ တကယျလုံးဝ မိုးနဲ့မွေ၊ အဖွူနဲ့အမညျးလို ဆနျ့ကငျြဘကျကွီးဖွဈနရေငျတော့ ရှဆေ့ကျဖို့အတှကျ တျောတျောကွီးကို ညှိနှိုငျးရမယျ့ အခွအေနမြေိုးဖွဈသှားပါပွီ။ (ဥပမာ သူကတော့ မွို့ကွီးပွကွီးတှမှော ခမျးခမျးနားနား နခေငျြပွီး ကိုယျကတော့ နယျမွို့လေးတဈခုမှာ အေးအေးခမျြးခမျြးနခေငျြတဲ့ လူဖွဈနတောမြိုးပေါ့။)
၄။ သူ့အတှကျ ပေးဆပျခငျြစိတျ မရှိတော့ဘူး။
အခဈြရေးမှာ ၈၀ ရာခိုငျနှုနျးလောကျက ပေးဆပျခွငျးတှနေဲ့ ဖွညျ့စှကျထားတာပါ။ (ဥပမာ ကိုယျ့မှာ ပစ်စညျးတဈခုခုဝယျခငျြပမေဲ့ သူ့အတှကျက ဒါလိုအပျမှနျးသိတော့ ကိုယျ့လိုခငျြစိတျကို မွိုသိပျပွီး သူ့အတှကျလိုတာပဲ ဝယျပေးလိုကျတာမြိုးပေါ့။) အကယျ၍ ကိုယျ့မှာ သူ့အတှကျ ပေးဆပျခငျြစိတျ လုံးဝ မရှိတော့ဘူးဆိုရငျတော့ ကိုယျ့အခဈြတှလေညျး ကုနျခမျးသှားပွီဆိုတဲ့ အဓိပ်ပာယျပါပဲ။
၅။ သူနဲ့ ဝေးရာအရပျမှာ ပိုပြျောတယျ။
ဒါကတော့ တအားရှငျးပါတယျ။ ခဈြနကွေတဲ့ လူတှဆေိုရငျတော့ တဈပတျလောကျ မတှရေ့ရငျတောငျ ကိန်နရာခြောငျးခွားပွီး အလှမျးပငျလယျဝနေကွေမှာ ဆိုပမေဲ့ သူမရှိတဲ့ရပျဝနျးမှာ ပိုပြျောနပွေီဆိုရငျတော့ ဘာလို့သူရှိတဲ့အရပျကို ထပျသှားဖို့ကွိုးစားဦးမှာလဲ?
၆။ အမွဲတမျး စိတျဒုက်ခ ရောကျနရေတယျ။
အမွဲတမျး စိတျဆငျးရဲနရေမှနျးတော့ သိတယျ။ မကျြနှာအမူအရာကလညျး ထုံထုံထိုငျးထိုငျးနဲ့ စိတျကလညျး အိပျပဲအိပျခငျြနသေလိုလို စိတျဓာတျတှကေပြွီး အိပျရာထဲမှာပဲ ခှခေေါကျနခေငျြသလိုလို ဘာလို့မှနျးမသိ စိတျဆငျးရဲရတဲ့အထဲ သူ့မကျြနှာကိုမွငျရတဲ့အခြိနျမှာ ကိုယျ့ဒုက်ခတှေ၊ စိတျဆငျးရဲစရာတှကေ နှဈဆလောကျ ဖွဈလာရငျတော့ တဈခြောငျခြောငျမှာ ကပျပွီး ဒုက်ခပငျလယျဝနေရေတဲ့ အကွောငျးအရငျးကို သခြောပွနျဆနျးစဈသငျ့နပေါပွီ။
နှငျးတို့တှကေလေ တဈခါတလကေတြော့ အရမျးရူးမိုကျကွတယျ သိလား။ ဆကျမဖွဈနိုငျမှနျး တိတိကကြသြိနတေဲ့ အခဈြဇာတျလမျးတဈခုကို အတငျးရှဆေ့ကျဖို့ ပွုပွငျဖို့ ကွိုးစားတတျကွရော။ တကယျတမျးခံစားရတာ ကိုယျပါ။ တခွားလူတှကေို ငါလကျလှတျရတော့မလားလို့ မေးနမေယျ့အစား ကိုယျ့ဘာသာဆုံးဖွတျခကျြကို တိခနဲခလြိုကျပါ။ ကိုယျ့ဝမျးနာ ကိုယျသာသိမဟုတျလား။ ကိုယျ့အကွောငျး၊ ကိုယျ့အတှငျးရေးကို ကိုယျ့ထကျပိုပွီး ဘယျသူကမြားသိနိုငျမှာမို့လို့လဲ။
Tags: breakup, decisions, Hard, move on, right, signs, Time
Hnin Ei Oo November 23, 2018